कोरोना वा अरु कारणले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा सावधानी अपनाऔँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कोरोना वा अरु कारणले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा सावधानी अपनाऔँ
पुस १५, २०७७ बुधबार ११:३३:२६ | डा. शेरबहादुर पुन
काठमाण्डाै - कोरोना भाइरस पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । सङ्क्रमितको संख्या भने कम हुँदै गएको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुन थालेकाले अरु रोगका बिरामीहरु अस्पताल जान थालेका छन् ।
उपचारको लागि डाक्टरसम्म पुग्न टिकट लिनुपर्ने हुन्छ । टिकट लिनका लागि अस्पतालहरुमा बिरामी र उनीहरुको आफन्तको लामो लाइन लाग्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
लाइनमा बसेकामध्ये कसलाई सङ्क्रमण भएको छ कसलाई छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । लाइनमा उभिएकामध्ये एक जनालाई मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ भने पनि अरुलाई सर्न सक्छ ।
अस्पताल गएपछि मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको यस अगाडिका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सर्जरी गर्न, बच्चा जन्माउनलगायत विभिन्न कारणले अस्पताल गएकाहरुमा अस्पताल गएपछि मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थाहा पाइएको थियो ।
कोरोनाको वा अन्य कारणले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको हुन्छ । बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई दूरी कायम गरेर लाइनमा उभिन लगाउने, मास्क लगाए, नलगाएको अनुगमन गर्ने, कोरोना भएका र नभएकालाई छुट्याएर उपचार गर्ने भूमिका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको हुन्छ ।
हुन त सरकारले निजी अस्पतालमा अबदेखि कोरोनाको उपचार नगर्ने भनेर भनिसकेको छ । तै पनि पूर्णरुपमा जोखिम कम नभइसकेको अवस्थामा सावधानी अपनाउनुपर्छ । सतर्कताका कुरा गर्नेबित्तिकै मास्क लगाउने र दूरी कायम गर्ने कुराहरु आउँछ । अस्पताल पुगेर फर्केको अवस्था छ भने घरमा आएपछि साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नेलगायतका सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
कोरोना भाइरस जोखिमका कारण लामो समयसम्म विभिन्न किसिमका समस्या भएका दीर्घरोगीहरु अस्पताल जान पाएनन् । कोरोना जोखिम कम भएसँगै लामो समयसम्म अस्पताल जान नपाएका बिरामीहरु अस्पताल एकैपटक जाँदा भीडभाड हुन सक्छ ।
कोराेनाको जोखिम अझै छ भनेर बुझ्नुपर्छ । कोरोना सकियो भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हामीले पहिलादेखि नै जे जस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेका छौँ, त्यही सावधानी अपनाउने हो । डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र बिरामीका आफन्त सबैले यो नियम पालना गर्नुपर्छ । अस्पताललाई कोरोना सार्ने स्रोत बनाउनु हुँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा अस्पतालको व्यवस्थापन हो ।
कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थामा जस्तै नै अब पनि बिरामीले सेवा पाउँछन् । तर अहिले पनि उपचार गर्ने र गराउने दुवैमा कोरोनाको डर कायम नै छ । नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भएर विश्वका कुनै पनि कुनामा कोरोना रहँदासम्म यो डर रही रहन सक्छ । किनभने विश्वको कुनै पनि कुनाबाट कोरोना भाइरस नेपाल आउने सम्भावना भइरहन्छ।
कोभिड-१९ पनि चीनबाट सिधै नआइकन, युरोप, अमेरिका तथा भारत हुँदै नेपाल छिर्यो । त्यसकारण उपचार गर्ने र गराउनेमा एक खालको शंका त हुन्छ नै । विश्वमा कोरोना भाइरसको उतारचढाव छउञ्जेल यो शंका रहिरहन्छ ।
चीनमा देखिँदा पनि नेपालमा मानिस सशंकित भएका थिए । तर डराएका तथा शंका गरेर मात्र हुँदैन । होसियारीपूर्वक उपचार गर्नुपर्छ ।
(शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका सरुवा रोग विषशज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँग जानुका दुवाडीले गरेको कुराकानीमा आधारित )
अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०७८
डाक्टर पुन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकाे क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयाेजक हुनुहुन्छ ।
अमेरिकालाई चीनकाे चेतावनी : ‘शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गरे ...